Roberto Lapid. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Pasión imperfecta | Akwụkwọ akụkọ
Foto: Roberto Lapid, profaịlụ Twitter.
Robert Lapid Ọ bụ Argentine si Cordoba ma bi ugbu a n'etiti obodo ya na Spain. Odelarị akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, ọkachasị ndị akụkọ ihe mere eme dabere na ezigbo ikpe, dịka Dizna: Ozi si n'oge gara aga ma ọ bụ Weis Enigma. Na nke ikpeazụ bụ Mmasị ezughị oke, ya na onye na-eme ihe nkiri pụrụ iche: onye na-eme ihe nkiri Hedy lamarr. Na nke a Ajụjụ ọnụ na-agwa anyị banyere ọrụ a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na Ekele m gị ọtụtụ oge na obiọma inye m ya.
Roberto Lapid - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ NDỊ AKWỤKWỌ ỤLỌ : Aha akwụkwọ ọhụrụ gị bụ Mmasị ezughị oke. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
ROBERT LAPID: Embrayo nke akụkọ a mụrụ n'etiti ugwu ụfọdụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke obodo Cordoba dị na Argentina. Enwere ọtụtụ ihe owuwu dị iche iche ebe ahụ ma otu n'ime ha dọọrọ mmasị m: Mandl Castle. N'obodo gbara agbata obi dị iche iche, a kpọtụrụ aha na-emegiderịta onwe ya akụkọ banyere onye bu onye nwe ya, Fritz Mandl: Ndị nledo maka ndị ha na ha jikọrọ aka n'oge agha?
Nnyocha ahụ gosiri na Fritz bụbu a ndị na-emepụta ngwá agha dị ike na nde mmadụ. Ọpụpụ, nke na-enweghị atụ na ama ama, nke ọtụtụ ndị na-akpọ asị ma na-asọpụrụ. Ndị ahịa ya abụbeghị onye ọzọ karịa Hitler, Mussolini na Franco, n'etiti ndị ọzọ, na ndị enyi ya bụ General Perón, Hemingway, Truman Capote na Orson Wells.
Fritz na-ahụ ihe nkiri ahụ na microcinema nke ụlọ ya na Vienna Ecstasy, ebe Hedy Kiesler na-eme ịgba ọtọ na nke mbụ orgasm hụrụ na ihuenyo mgbe ọ dị afọ 16. Nke a na-eto eto nwere onyinye, onye na-amụ ihe nkiri na injinia ma na-asụkwa asụsụ dị iche iche nke ọma. lụrụ Fritz. Ha abụọ bi na nnukwu ụlọ ha dị na Salzburg na Hedy bụ ezigbo onye ọbịa ịnata ụdị agwa niile. N'etiti abụọ a ahuhu dị ka enweghị nchịkwa ka ọ na-emebi. Mgbe ahụ Hedy Kiesler gbapụrụ wee bata na Hollywood ka ọ bụrụ Hedy Lamarr, nwanyị kachasị mma na sinima. Mana, na mgbakwunye, ọ na-enye ikike imepụta ihe, gụnyere usoro nkwukọrịta nke butere ihe dị taa wifi, GPS na Bluetooth.
Ọ bụ akụkọ mere eme, nke nwere nkata ebe ndị odide ahụ bụ ndị na-akwado ọtụtụ ihe omume dị mkpa nke narị afọ nke XNUMX.
RL: N'etiti ịgụ akwụkwọ mbụ m n'oge nwata, ana m echeta saga nke Sandokan, agu MalaysianEmilio Salgari dere. Akụkọ mbụ m Edere ya mgbe ọ dị afọ 14, acuento maka asọmpi sitere na Editorial Kapeluz. Imeri jackpot welitere mmasị m. N’ihi ya, m malitere ide akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ ahụ. Mgbe e mesịrị, mgbe o mere okenye, ndetu, akụkọ ihe mere eme na akụkọ ndị e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ ụfọdụ. Akwụkwọ akụkọ mbụ m aghaghị ichere ruo mgbe 2010 ịhụ ìhè.
RL: Agụọla m ọtụtụ: AJ Cronin, Howard Fast, Jọn Le Carre, Ken mpempe akwụkwọ, Wilbur Smith, Carmen Laforet, Paul oporo, Julaị Verne, Cervantes, Homer, Walter Ikenna, Herman Hesse.
RL: Ọ ga-amasị m izute robert langdon, kpakpando nke akwụkwọ Dan Brown, ugbua ọtụtụ ihe odide nke akụkọ nke Noa gordon.
RL: Tupu ịme akụkọ Enwere m mmasị ime nyocha: nweta faịlụ, gbara ndị akaebe ajụjụ ọnụ, gagharịa na oghere. Jụọ, kpughee ihe zoro ezo, nyefee ihe nta mara ma nke dị mkpa.
RL: M na-arara ehihie n'ehihie maka akwụkwọ, mgbe anaghị m ese ihe. M na-agbanwe oghereIkekwe n'ihi na eziokwu nke njem na ibi n'etiti Barcelona na Argentina ruo ọtụtụ afọ. Iji dee m na-ahọrọ oghere nwere nnukwu ọkụ, ịgbachi nkịtị na ịnọ naanị ya.
RL: Iji gụọ, ndepụta a dị iche iche: njem nlegharị anya, mgbagwoju anya, agụụ mmekọahụ. Iji dee, akwụkwọ akụkọ dabere na ezigbo ikpe. N'oge a naanị ya.
RL: Ana m agụ Brooklyn follies, na Paul auster yhEmechara m ide a nkwonkwo onye ga-eme n'ọdịnihu n'ime Valencian n'ụsọ oké osimiri. Ihe mgbawa sitere na 1969 metụtara ihe omume ndị a na-amaghị ama na akụkọ ihe mere eme Spanish na nso nso a ebe ha bilitere ndị aghụghọ, ozi ivu e ihe aghụghọ zoro ezo. Akwụkwọ a adịlarị na onye bipụtara ya, dị njikere ibipụta ya.
Ana m arụ ọrụ ugbu a na a akụkọ ihe mere eme nke a na-eme n'oge okpomọkụ Agha Nzuzo na berlin kewara site na mgbidi a ma ama. Akwụkwọ akụkọ abụọ a gbadoro ụkwụ n'eziokwu nke butere nyocha na-adọrọ mmasị.
RL: Ụwa obibi akwụkwọ siri ike ma ọrịa na-efe efe emebiwo ahịa ahụ. Enwere m suerte inwe a ezigbo ụlọ ọrụ na-ede akwụkwọ na onye mbipụta na-akwado ọrụ m. M na-atụ anya nke ọma ma anaghị m akwụsị ide.
Edere m ihe odide mbụ ma ziga ya ụfọdụ ndị nkwusa Argentine, otu n’ime ha kpọtụụrụ ma mesịa bipụta atọ n’ime akwụkwọ m. Ugbu a site na Roca Editorial de Barcelona ederede m ruru ọtụtụ mba ndị na-asụ Spanish.
RL: O siri ike. M tọrọ atọ na Argentina n'okpuru kwarantaini dị ogologo na nke siri ike. Ide ihe, eserese, ezinụlọ ndị nọ n'ebe dị anya na nkwurịta okwu n'etiti ndị enyi nyere aka ịnagide owu ọmụma na njide. A ìhè olileanya na ihe m chọrọ na-emezu na nwetaghachi nnwere onwe na ahụike, na mgbakwunye na-ahapụ anyị mkpa mmụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Roberto Lapid. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ Pasión imperfecta